Voucherify- Voucherify ၏ အခမဲ့အစီအစဉ် | ဖြင့် စိတ်ကြိုက်ပရိုမိုးရှင်းများကို စတင်ပါ။ Martech Zone
ကွမ်းခြံကုန်း လျှော့စျေးကူပွန်များ၊ အလိုအလျောက် ပရိုမိုးရှင်းများ၊ လက်ဆောင်ကတ်များ၊ ထီပေါက်ခြင်း၊ ဖောက်သည်အစီအစဉ်များနှင့် လွှဲပြောင်းပေးသည့် အစီအစဉ်များကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့် ပရိုမိုးရှင်းကမ်ပိန်းများကို စတင်ရန်၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ခြေရာခံရန် ကူညီပေးသည့် API ၏ ပထမဆုံး ပရိုမိုးရှင်းနှင့် သစ္စာစောင့်သိမှု စီမံခန့်ခွဲမှု ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့် ပရိုမိုးရှင်းများ၊ လက်ဆောင်ကတ်များ၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ၊ သစ္စာစောင့်သိမှု သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းပေးသည့် အစီအစဉ်များသည် တိုးတက်မှု၏အစောပိုင်းအဆင့်များတွင် အထူးအရေးကြီးပါသည်။
ကိုယ်ပိုင် လျှော့စျေးကူပွန်များ၊ စျေးဝယ်လှည်း ပရိုမိုးရှင်းများ သို့မဟုတ် လက်ဆောင်ကတ်များကို စတင်ရောင်းချခြင်းသည် သုံးစွဲသူအသစ်များကို ဆွဲဆောင်ရန်အတွက် အရေးကြီးသည့် ဖောက်သည်ဝယ်ယူမှုတွင် မကြာခဏဆိုသလို စတင်လုပ်ဆောင်မှုများသည် မကြာခဏ ရုန်းကန်နေရပါသည်။
အမေရိကန်စားသုံးသူများ၏ 79% ကျော်နှင့် UK စားသုံးသူ 70% တို့သည် ကောင်းမွန်စွာဖန်တီးထားသော ကိုယ်ပိုင် e-commerce အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူ ပါ၀င်သည့် တစ်ဦးချင်းကုသမှုကို နှစ်သက်သဘောကျကြသည်။
start-ups များအတွက် ဖောက်သည်အခြေခံသည် အများအားဖြင့်နည်းသောကြောင့်၊ အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းသည် နည်းဗျူဟာ၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စျေးဝယ်ခြင်း ပရိုမိုးရှင်းများနှင့် ကုန်ပစ္စည်းအစုအဝေးများကို စတင်ရောင်းချခြင်းသည် အရောင်းမြှင့်တင်ရာတွင် များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။
ရည်ညွန်းပရိုဂရမ်များသည် နှုတ်ကပတ်တော်ထွက်ရန် အရေးကြီးပြီး ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်တစ်ခုရှိသော်လည်း မြင်နိုင်စွမ်းနည်းသော start-up များအတွက် တိုးတက်မှုအင်ဂျင်ဖြစ်လာနိုင်သည် (OVO စွမ်းအင်ဥပမာအားဖြင့်၊ စျေးကွက်အသစ်တစ်ခုသို့ဝင်ရောက်ရန် ဤနည်းဗျူဟာကို အသုံးပြုခဲ့သည်)။
ရည်ညွှန်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည် အခြားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးချန်နယ်များထက် ကူးပြောင်းနှုန်း ၃ ဆမှ ၅ ဆအထိ မြင့်မားစေသည်။ ဖောက်သည်များ၏ 3% သည် ၎င်းတို့၏ သူငယ်ချင်းများ၏ အကြံဉာဏ်ကို ယုံကြည်ကြပြီး 5% သော ဖောက်သည်များသည် ထုတ်ကုန်တစ်ခုဝယ်ယူရန် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့သိထားသူတစ်ဦးမှ အကြံပြုထားသော ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုရန် ဆန္ဒရှိကြသည်။
Nielsen- ကြော်ငြာကို ယုံကြည်ပါ။
အထူးသဖြင့် အထူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ဖောက်သည်အသစ်များ၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။
သစ္စာစောင့်သိမှုပရိုဂရမ်တစ်ခုသည် စတင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက် လွန်ကဲနေပုံရသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် ဖောက်သည်များဆုံးရှုံးရန် စွန့်စားရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ရရှိရန် အလွန်အားစိုက်ထုတ်ကာ ငွေကြေးများစွာထည့်ဝင်ထားကြသည်။ ထို့အပြင်၊ ထိန်းထားနိုင်မှု 5% တိုးလာခြင်းသည်ပင် အတိုင်းအတာအထိ ဖြစ်စေနိုင်သည်။ 25-95% အမြတ်အစွန်းတိုး။
Voucherify က အခုလေးတင် မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ အခမဲ့စာရင်းသွင်းမှုအစီအစဉ်. ဤသည်မှာ တီထွင်သူအချိန်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဖြင့် အလိုအလျောက်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့် ပရိုမိုးရှင်းများ စတင်ရန်နှင့် သုံးစွဲသူများရယူမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းထားမှုကို အခမဲ့မြှင့်တင်ပေးသည့် start-up နှင့် SMEs များအတွက် အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခမဲ့အစီအစဉ်တွင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့် ပရိုမိုးရှင်းများ၊ လက်ဆောင်ကတ်များ၊ ထီပေါက်ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းနှင့် သစ္စာစောင့်သိမှု ကမ်ပိန်းများအပါအဝင် အင်္ဂါရပ်အားလုံး (geofencing မှလွဲ၍) နှင့် ကမ်ပိန်းအမျိုးအစားများ ပါဝင်သည်။
အခမဲ့စာရင်းသွင်းမှုအစီအစဉ်ကို စတင်ကမ်းလှမ်းရခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။ ၎င်းသည် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းများနှင့် SMBE အများအပြား၏ တိုးတက်မှုကို စတင်နိုင်စေရန် ကူညီပေးလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ပြီး ၎င်းတွင် ပါဝင်ခွင့်ရသည့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ပျော်ရွှင်ပါသည်။ Voucherify ကို ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူများအတွက် ဖန်တီးထားပြီး ၎င်းတို့အတွက် တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့် လုပ်ငန်းအရွယ်အစားအားလုံးအတွက် ခေတ်မီနည်းပညာများကို ပေးဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့စိတ်လှုပ်ရှားပါသည်။
Voucherify ၏ CEO Tom Pindel
အခမဲ့ Voucherify အစီအစဉ်တွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်ပါသည်။
API ခေါ်ဆိုမှု 100/နာရီ။
တစ်လလျှင် API ခေါ်ဆိုမှု 1000
စီမံကိန်း ၁ ခု။
အသုံးပြုသူ ၃ ။
Voucherify ကို အသုံးပြု၍ ကြီးထွားလာခဲ့သည့် start-up ၏ ဥပမာတစ်ခုမှာ Tutti. Tutti သည် အစမ်းလေ့ကျင့်မှု၊ စစ်ဆေးမှု၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှု၊ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမှု၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု သို့မဟုတ် အခြားအရာများဖြစ်စေ တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအတွက် နေရာများငှားရမ်းနိုင်သည့် တီထွင်ဖန်တီးသူများအတွက် ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုကို ပေးဆောင်သည့် UK အခြေစိုက် start-up တစ်ခုဖြစ်သည်။ Tutti သည် ၎င်းတို့၏ ဝယ်ယူမှုကို မြှင့်တင်ရန် ရည်ညွှန်းအစီအစဉ်များနှင့် အရောင်းမြှင့်တင်ရေး လှုပ်ရှားမှုများကို စတင်လိုပြီး API-ပထမဖြစ်ပြီး API အခြေပြု ပလပ်ဖောင်းများကို အသုံးပြုသည့် ၎င်းတို့၏ လက်ရှိ microservices-based architecture နှင့် ကိုက်ညီမည့် ဆော့ဖ်ဝဲဖြေရှင်းချက် လိုအပ်ပါသည်။ အစင်း, အပိုင်းအစိတ်, ActiveCampaign.
Voucherify ဖြင့် သွားရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် အခြားသော API-ပထမဆော့ဖ်ဝဲလ်ပံ့ပိုးပေးသူများကို စစ်ဆေးခဲ့သော်လည်း ၎င်းတို့တွင် Voucherify ထက် များစွာမြင့်မားသောစျေးနှုန်းများ သို့မဟုတ် အခြေခံပက်ကေ့ဂျ်ရှိ ပရိုမိုးရှင်းအခြေအနေအားလုံးကို မကမ်းလှမ်းခဲ့ပါ။ Voucherify နှင့် ပေါင်းစည်းခြင်းသည် ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာ နှစ်ဦးပါ၀င်သော Tutti အတွက် ခုနစ်ရက်ကြာ ပေါင်းစည်းမှုတွင် အလုပ်စတင်ချိန်မှ ပထမဆုံးကမ်ပိန်းကို စတင်နိုင်သည်အထိ ရေတွက်ပါသည်။ Voucherify ကြောင့် ၎င်းတို့၏ ကမ်းလှမ်းမှုများကို စိတ်ဝင်စားမှု တိုးလာကာ အလှူအတန်းများနှင့် စွန့်ဦးတီထွင်သူများကို လျှော့စျေးများ ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ အဖွဲ့သည် လူသိရှင်ကြား ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။
Tutti Case Study ကို Voucherify လုပ်ပါ။
စာရင်းသွင်းမှု အစီအစဉ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ ကန့်သတ်ချက်များကို Voucherify တွင် အသေးစိတ် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်သည်။ စျေးနှုန်းစာမျက်နှာ.
ကွမ်းခြံကုန်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်မက်လုံးများပေးဆောင်သော API-ဗဟိုပြုမြှင့်တင်ရေးနှင့်သစ္စာစောင့်သိမှုစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ Voucherify သည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များကို လျင်မြန်စွာစတင်ရန်နှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသော ကူပွန်များနှင့် လက်ဆောင်ကတ်ပရိုမိုးရှင်းများ၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ၊ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းနှင့် သစ္စာစောင့်သိမှုအစီအစဉ်များကို ထိရောက်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များကို အစွမ်းထက်စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ API ၏ပထမ၊ ဦးခေါင်းမပါသောတည်ဆောက်မှုနှင့်သေတ္တာပြင်ပတွင်များစွာသောပေါင်းစပ်မှုများကြောင့် Voucherify သည်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းပေါင်းစပ်နိုင်ပြီး၊ အချိန်နှင့်စျေးကွက်ကိုအလွန်တိုတောင်းပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ပရိုဂရမ်လုပ်နိုင်သော ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ကွက်များသည် မည်သည့်ချန်နယ်၊ မည်သည့်စက်ပစ္စည်းနှင့်မဆို e-commerce ဖြေရှင်းချက်များနှင့် မက်လုံးများကို ပေါင်းစပ်ရန် ကူညီပေးသည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့သည် အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း၊ အပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သည့်နေရာမှ စျေးကွက်ရှာဖွေသူနှင့် လိုက်ဖက်သော ဒက်ရှ်ဘုတ်တစ်ခုသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဖွဲ့မှ တာဝန်ကို ယူဆောင်သွားပါသည်။ Voucherify သည် ပရိုမိုးရှင်းဘတ်ဂျက်ကို မလောင်ကျွမ်းဘဲ သင်၏ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းမှုနှုန်းများကို မြှင့်တင်ရန် လိုက်လျောညီထွေရှိသော စည်းမျဉ်းများအင်ဂျင်ကို ပေးဆောင်ပါသည်။
Voucherify သည် အရွယ်အစားအားလုံးရှိ ကုမ္ပဏီများကို ၎င်းတို့၏ ဝယ်ယူမှု၊ ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ပြောင်းလဲမှုနှုန်းများကို မြှင့်တင်ရန် ခွင့်ပြုသည်။ e-commerce အကြီးကြီးတွေလုပ်သလိုပါပဲ။ကုန်ကျစရိတ်၏တစ်စွန်းတစ်စမှာ။ ယနေ့အထိ၊ Voucherify သည် ဖောက်သည် 300 ကျော်၏ယုံကြည်မှုကို ရရှိထားပြီး (၎င်းတို့အနက် Clorox၊ Pomelo၊ ABInBev၊ OVO Energy၊ SIG Combibloc၊ DB Schenker၊ Woowa Brothers၊ Bellroy သို့မဟုတ် Bloomberg) သည် သန်းနှင့်ချီသော စားသုံးသူများကို ဝန်းကျင်ပရိုမိုရှင်းကမ်ပိန်းများမှတဆင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ ကမ္ဘာလုံး။
Voucherify ကို အခမဲ့ စမ်းသုံးကြည့်ပါ။
Tags: agileoneအလိုအလျောက်အရောင်းမြှင့်တင်မှုများလျှော့စျေးကူပွန်အခမဲ့မြှင့်တင်ရေးလက်ဆောင်ကတ်များသစ္စာစောင့်သိမှု အစီအစဉ် apiသစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်များNielsenပရိုမိုးရှင်း apiလွှဲပြောင်းအစီအစဉ်များအပိုင်းအစိတ်တင်ရေးတွမ် pindelကွမ်းခြံကုန်း